I-Internet Ministries - Ziziphi iicawa zikaKristu?
Omnye wabameli bokuqala bokubuyela kubuKristu beTestamente Entsha, njengendlela yokufezekisa ubunye kuwo wonke amakholwa kuKristu, nguYakov O'Kelly weCawa ye-Methodist Episcopal. Ku-1793 wabuya kwinkomfa yaseBaltimore yecawa yakhe waza wabiza abanye ukuba bamjoyine ekuthatheni iBhayibhile njengenkolo kuphela. Impembelelo yakhe yayivakala kakhulu kwiVirginia naseNorth Carolina apho iirekhodi ezirekhodiweyo ukuba abanye abaxhamli bee-7 000 balandela ubukhokeli bakhe ekubuyiseleni kubuKristu bokuqala beTestamente eNtsha.
Kwi-1802 intshukumo efanayo phakathi kwamaBaptisti eNew England yayikhokelwa nguAbnner Jones no-Elias Smith. Babenenkxalabo malunga "namagama kunye neenkolo zamahlelo" kwaye banquma ukugqoka kuphela igama lobuKristu, bathathe iBhayibhile njengesikhokelo sabo kuphela. Kwi-1804, kwimeko engasentshonalanga yeKentucky, uBarton W. Stone kunye nabanye abavakalisi bePresbyterian bathatha isenzo esifanayo besithi bayeza kuthatha iBhayibhile ngokuthi "yiyo kuphela inkhokelo eya ezulwini." UTomas Campbell, kunye nendodana yakhe ephawulekayo, uAlexandro Campbell, wathatha amanyathelo afanayo kunyaka lwe-1809 kwinto ngoku i-West Virginia. Baye balwela ukuba akukho nto ifanele iboshwe kumaKristu njengomcimbi ongemdala nje ngeTestamente Elisha. Nangona ezi ntshukumo ezine zazizimeleyo ngokupheleleyo ekuqaliseni kwazo ekugqibeleni zaba yintlambo yokubuyisela eyomeleleyo ngenxa yeenjongo zabo ezifanayo kunye nesicelo. La madoda awazange avumele ukuqala kwecawa entsha, kodwa kunokuba ubuyele kwicawa kaKristu njengoko kuchazwe kwiBhayibhile.
Amalungu ebandla likaKristu akazikhulelanga njengokuba ibandla elitsha liqalise ngasekuqaleni kwekhulu le-19. Kunoko, yonke inzululwazi yenzelwe ukuvelisa ngexesha langoku icawa yokuqala eyayisungulwa ngePentekosti, AD 30. Amandla esi sibheno sisekubuyiselweni kwecawa yasekuqaleni kaKristu.
Ngokuyinxalenye isisombululo sokunxibelelana konqulo okusekelwe kwiBhayibhile. Kwihlabathi lonqulo elalihlukileyo kukholelwa ukuba iBhayibhile yodwa yinto eqhelekileyo eyaziwayo apho abantu abaninzi belizwe abanokuhlonela uThixo banokubumbana, ukuba kungenjalo. Esi sibheno sokubuyela eBhayibhileni. Yincongo yokuthetha apho iBhayibhile ithetha kwaye ihlale ithule apho iBhayibhile ingathuli kuyo yonke imiba ephathelele inkolo. Iphinda igxininise ukuba kuyo yonke into yonqulo kufuneka ibe "Itsho iNkosi" kuyo yonke into eyenziwe. Injongo yintlangano yonqulo kuwo wonke amakholwa kuKristu. Isiseko yiTestamente Entsha. Indlela yokubuyiselwa kobuKristu beTestamente eNtsha.
Uqikelelo oluthembekileyo lwakutshanje luluhlu ngaphezu kweeCawa ze-15,000 ngabanye. "I-Christian Herald," incwadi ebalulekileyo yenkolo ebonisa amanqaku malunga nawo onke amabandla, iqikelele ukuba ubulungu bonke beecawa zikaKristu ngoku ngu-2,000,000. Kukho amadoda angaphezu kwama-7000 abashumayela esidlangalaleni. Ubulungu becawa bubaluleke kakhulu kumazwe asezantsi aseUnited States, ngokukodwa eTennessee naseTexas, nangona amabandla ekhona kwiindawo ezimashumi mahlanu kunye nakwamanye amazwe angama-80 angaphandle. Ukwandiswa koMvangeli kuye kwandiswe kakhulu kwiMfazwe Yehlabathi yesibili eYurophu, e-Asia nase-Afrika. Ngaphezu kwe-450 abasebenzi bexesha elipheleleyo basekelwa kumazwe angaphandle. Iicawa zaKrestu ngoku zinamalungu amaninzi amahlanu njengokuba zichazwe kwiCensus Census ye-US ye-1936.
Kwibandla ngalinye, elide lide ngokwaneleyo ukuba lilungelelaniswe ngokupheleleyo, kukho abadala abaninzi okanye abaphathi-mthetho abasebenza njengebhunga elilawulayo. La madoda akhethwe ngamabandla asekuhlaleni ngenxa yeziqinisekiso ezibekwe kwizibhalo (1 Timothy 3: 1-8). Ukukhonza phantsi kwabadala ngabadikoni, ootitshala, kunye nabavangeli okanye abaphathiswa. Ezi zilandelayo zingenalo igunya elilinganayo okanye eliphambili kubadala. Abadala bangabelusi okanye abaveleli abakhonza phantsi kobunhloko bukaKristu ngokutsho kweTestamente eNtsha, eyona hlobo lomgaqo-siseko. Akukho mlawuli osemhlabeni ophezulu kunabo abadala bebandla.
Ii-autographs zasekuqaleni zeencwadi ezingamashumi mathandathu ezithandathu ezenza iBhayibhile zibhekwa njengeziphefumlelwe nguThixo, oko kuthetha ukuba apheliyo kwaye anikwe igunya. Izikhokelo zezibhalo zenziwe ngokulungisa yonke imibuzo yonqulo. Isivakalisi esivela kwisibhalo siqwalaselwa njengegama lokugqibela. Incwadi yesiseko yecawa kwaye isiseko sabo sonke ukushumayela yiBhayibhile.
Ewe. Ingxelo ku-Isaya 7: I-14 ithathwa njengesiprofeto sokuzalwa kwentombi kaKristu. Iindinyana zeTestamente eNtsha ezifana noMathewu 1: 20, 25, zamkelwe kwixabiso elijongana neemeko zokuzalwa kwentombi. UKristu uyamkelwa njengoNyana ozelwe yedwa kaThixo, ehlanganisene nomntu wakhe obugqibeleleyo kunye nobuntu obugqibeleleyo.
Kuphela ngomqondo wokuthi uThixo ulungelelanisa ilungisa ukuba usindiswe ngonaphakade kwaye abangalunganga balahleke ngonaphakade. Ingxelo yompostile uPetros, "Inyaniso ndiyabona ukuba uThixo akahloniphi abantu; kodwa kuzo zonke iintlanga lowo uyamesabayo aze enze ukulunga uyamkeleka kuye" (IZenzo 10: 34-35.) Ithathwa njengento ubungqina bokuba uThixo akazange amisele ngaphambili abantu ukuba basindiswe ngonaphakade okanye balahleke, kodwa ukuba umntu ngamnye uzimisele isigqibo sakhe.
Igama lokubhaptiza livela kwigama lesiGrike elithi "baptizo" kwaye ngokuqinisekileyo lithetha ukuthi, "ukudibanisa, ukucwina, ukuphonsa." Ukongeza kwintsingiselo yangempela yeli gama, ukucwiliswa kwenziwa ngenxa yokuba kwakungumsebenzi wecawa kumaxesha opostile. Ngapha koko, ukucwiliswa kuphela kuhambelana nenkcazo yobhaptizo njengoko kunikwe ngumpostile uPawulos kwi-Roma 6: 3-5 apho uthetha khona njengengcwaba nokuvuswa.
Akunjalo kuphela abo bafikelele "ubudala bokuphendula" bamukelekile kubhaptizo. Kucaciswa ukuba imizekelo enikwe kwiTestamente Entsha ihlala yilabo baye bakuva iindaba ezilungileyo baze basikholelwa. Ukholo kufuneka luhlale lubhekisela kubhaptizo, ngoko kuphela abo badala ngokwaneleyo ukuba baqonde kwaye bakholelwe iindaba ezilungileyo babonwa njengezinto ezifanelekileyo zokubhaptizwa.
OoNgqongqoshe okanye abavangeli becawa abanalo ikhethelo ezikhethekileyo. Abafaki isihloko sikaMfundisi okanye uBawo, kodwa baqwalaselwa nje ngegama elithi uMzalwana njengabo bonke abanye abantu becawa. Ngabantu abadala kunye nabanye bacebisa kwaye bacebisa abo bafuna uncedo.